Zaha Home: iRazi Lounge-3br indawo ephezulu,WAPDA Idolophu - I-Airbnb
Zaha Home: iRazi Lounge-3br indawo ephezulu,WAPDA Idolophu
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMariam
Ipropathi esiyinikezelayo yiNdawo ePhezulu yekhaya lethu kwindawo eyi-1000sq yeeyadi. Yeyona ndawo ifanelekileyo yosapho kwiholide, enamagumbi okulala ama-3 amakhulu, indawo yokuhlala kunye neyokutyela, kunye nekhitshi. Sinikezela ngazo zonke izinto eziluncedo abahambi abazidingayo ukuze bazive bekwikhaya-kude-nekhaya njengefenitshala etofotofo, ingaphakathi elithandekayo, iTV, ii-ACs, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo njl.njl.
Indlu ibekwe kwindawo ethandekayo eneendawo zokubhaka, iimarike, iivenkile ezinkulu ezikufutshane; Isibhedlele saseShaukat Khanum sikumizuzu embalwa nje ukusuka apho.
Isithuba senziwe ngokwesiko ngephalethi enemibala emininzi egcina engqondweni zombini intuthuzelo kunye ne-aesthetics. Inegumbi lokulala eli-Master kunye namagumbi okulala ama-2 amakhulu, anamagumbi okunxiba kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite. Kukho indawo enkulu yokuhlala kunye negumbi lokutyela elilungele ukuba iintsapho zihlangane kunye. Ikhitshi eliphangaleleyo lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye libandakanya indawo yokuhlamba impahla. Inxalenye inomnyango wabucala oqinisekisa ukuba ubumfihlo beendwendwe. Amagumbi okulala ama-3 ancamathele amagumbi okuhlambela aneebhedi ezikhululekileyo ezilingana nokumkani kunye neskimu sombala esitsala amehlo
Ukuba unqwenela ukubamba umsitho ngexesha lokuhlala kwakho, sinawo a
*Iveranda (malunga ne-1000 sq ft)
*Igadi (malunga ne-1200 sq ft)
*ISakhiwo esingenanto (malunga ne-11000 sq ft) ngaphandle kwepropati
Zonke zinokubhukishwa ngeentlawulo ezahlukeneyo.
SineVan (Prince K07 - 7 seater) enomqhubi okhoyo kwiimfuno zakho zokuhamba (iintlawulo ezahlukeneyo)
65" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, intambo yepremiyamu
Ubumelwane yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu eLahore, kwidolophu yaseWapda. Isibhedlele saseShaukat Khanum kunye ne-Emporium Mall ziyimizuzu ukusuka apha. Kufuphi, kukho indawo yorhwebo eyenzekayo eneevenkile zazo zonke iintlobo eziphambili, iivenkile zokutyela, iikhefi, iisaluni, iikliniki, njl.njl. iJalalsons, enye yezona ndawo zidumileyo zokubhaka eLahore, kunye nevenkile enkulu ye-Euro Super kukuhamba komzuzu ukusuka endlwini. .
Umbuki zindwendwe ngu- Mariam
Isibini esingabanini kwaye sibambe ngokuthe ngqo indawo, uMnu & Mrs. Abidi, bahlala kumgangatho ophantsi wale ndlu. Iindwendwe zinokufikelela kubo ngomnxeba okanye ngemiyalezo ngaphambi kokufika kwabo nangexesha lokuhlala kwabo. Zinokufikelelwa nange-Intercom phakathi kwale migangatho mibini.
Isibini esingabanini kwaye sibambe ngokuthe ngqo indawo, uMnu & Mrs. Abidi, bahlala kumgangatho ophantsi wale ndlu. Iindwendwe zinokufikelela kubo ngomnxeba okanye ngemiyalezo ngap…